Fanavaozana ny rongony Texas Texas - Famerenana ny volavolan-dalàna marijuana ara-pitsaboana ao amin'ny mpanao lalàna TX
Fanavaozana ny rongony Texas Texas
TEXAS MEDIA CANNABIS UPDATE
Ho an'ireo rehetra miandry amin'ny rongony ara-pitsaboana any Texas: Texas dia mety ho fanjakana hafa eny an-dalana hanokatra ny indostrian'ny rongony ara-pitsaboana.
Izahay dia miresaka momba ireo volavolan-dalàna vaovao natolotry ny 9 novambra 2020, sy ny zavatra ambaran'izy ireo momba ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana rongony rongony ao amin'ny State Lone Star.
Ireo mpandraharaha rongony Texas dia niandry ny hisokafan'ny tsena amin'ny fanjakany, ary na dia toa efa akaiky ho tapitra aza ny fiandrasana, ireo lalàna vaovao dia mety tsy hahasoa ny olona eo amin'ny sehatry ny asa eo an-toerana araka ny nantenainay.
Andao hojerentsika izay lazain'ny volavolan-dalàna hahitanao izay antenaina amin'ny fizotran'ny fangatahana fahazoan-dàlana rongony rongony:
TX SB 90 ary TX HB 94
Ny volavolan-dalàna dia manome alalana ny fananana, fampiasana, fambolena, fizarana, fitaterana ary fanaterana rongony ara-pahasalamana ho an'ny fampiasana ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fanamarinana ireo marary izay manana aretina sasany. Fehezo ihany koa ny fahazoan-dàlana an'ireo fikambanana mpaninjara sy toeram-pitsapana.
Ity ny lahatsoratra feno momba ny volavolan-dalàna TX SB 90:
Ity ny lahatsoratra feno momba ny volavolan-dalàna TX HB 94:
Henoy ny PodCast anay Vaovao ara-dalàna cannabis na Jereo ny lohatenin'ny YouTube mitondra ny lohateny Vaovao farany momba ny rongony Texas - Famerenana ny volavolan-dalàna marijuana ara-pitsaboana miandry ao amin'ny mpanao lalàna TX raha misy fampahalalana mifandraika.
FIVAVAHANA MISY: LALNA DAKOTA atsimo atsinanana
Mahaliana ny hiditra amin'ny indostrian'ny valan-jaza?
Lisansa rongony ara-pahasalamana any Texas
Ny fandinihana rongony rongony ara-pahasalamana amin'ny volavolan-dalàna aroso dia tsy ny tsara indrindra. Ny antony dia satria tsy manome fotoana ahafahana tsena misokatra amin'ny fanjakana ireo faktiora ireo.
Mba hanazavana bebe kokoa ny toe-draharaha, ny tsena misokatra toa ny tsenan'ny rongony Oklahoma, omeo fotoana ny mpandraharaha rongony hiditra ao amin'ny indostria nefa tsy mametra ny isan'ny fahazoan-dàlana omena ary tsy misy fikajiana tafahoatra amin'ny fahazoana manao izany.
Misokatra ny fitsipiky ny fanjakana sasany, toy ny fanjakan'ny rongony california raha ny tanàna kosa dia mametra ny isan'ny fahazoan-dàlana omena.
Ny fanjakana hafa, toy ny fanjakan'i Arizona, dia nametraka fitsipika momba ny fahazoan-dàlana rongony mifatotra avo lenta. Ny volavolan-dalàna naroson'i Texas dia manolotra rafitra mitovy amin'ny an'i Arizona, ka mety hiteraka tsena mihidy be.
Ny olana amin'ireo maodely mitambatra mitsangana, tsy manome fotoana betsaka hidiran'ny mpandraharaha Texas hiditra amin'ny sehatry ny rongony rongony toy ny fomba marindrano kokoa. Izy io dia miendrika mpanohana vitsivitsy fotsiny.
Karazana fahazoan-dàlana rongony rongony avela any Texas
Fikambanan'ny mpizara rongony: fikambanana manana fahazoan-dàlana hitrandrahana, hanodinana ary hanomezana rongony ara-pitsaboana ho an'ny marary izay amporisihina hampiasa fitsaboana.
Toeram-pitsapana rongony: orinasa tsy miankina manana alalana amin'ny departemanta amin'ity toko ity dia manadihady ny fiarovana sy ny tanjaky ny rongony ara-pitsaboana.
Fahafahana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony rongony any Texas
Ny mpangataka fahazoan-dàlana hiasa ho toy ny fikambanana mpaninjara dia afaka mahazo alalana raha manana ny mpangataka:
Ny fahaizana teknika sy teknolojia mamboly sy mamokatra rongony ara-pahasalamana;
Ny fahaizana miantoka:
Ny loharanon-karena sy ny mpiasa ilaina hiasa ho toy ny fikambanana mpaninjara; ary
toerana misy antonony mba hamelana ireo marary voatanisa amin'ny fisoratana anarana mampiasa fangorahana amin'ny fikambanana amin'ny alàlan'ny fotodrafitrasa efa misy;
Ny fahaizana mitazona ny maha-tompon'andraikitra ny akora, ny vokatra vita ary ny vokatra ampiasana amin'ny famokarana na famokarana rongony ara-pahasalamana mba hisorohana ny fidirana tsy ara-dalàna na ny fanodikodinana na ny fananana ireo fitaovana, vokatra na vokatra azo avy amin'ny lalàna;
Ny fahaizana ara-bola hitazomana ny asany mandritra ny roa taona latsaka ny daty fampiharana
Ny sarany fahazoan-dàlana hividianana rongony any Texas
Ny faktiora rongony ara-pitsaboana any Texas dia manondro fetra iray hametrahan'ny Tale ny saran'ny fahazoan-dàlana isan-taona ho an'ny Program Cannabis Medical, tsy afaka mihoatra ny $ 5,000 izy io. Natolotra ihany koa ny saram-pampianarana, tsy tokony hihoatra ny $ 2,500 izy io